Ogaden News Agency (ONA) – Wariye Caan Ah oo Maqaal Ku Ifiyay Dhaqanka Wayaanaha.
Wariye Caan Ah oo Maqaal Ku Ifiyay Dhaqanka Wayaanaha.
Mid kamid ah saxafiyiinta ugu caansan aduunka oo wax kaqoray xaalada wadanka Gumaysiga Itoobiya ayaa sheegay in wadanka Itoobiya uu sanadihii ugu dambeeyay wajahayay qalalaase aad uwayn oo saameeyay dhamaan hay’adaha kala duwan ee xukuumada wayaanaha.
Wariyaha ayaa sheegay in xukuumada hada jirta ee wayaanuhu ay gabi ahaanba kufashilantay hogaaminta wadanka, waxayna xukuumada ku guul daraysatay ayuu yidhi daminta iyo latacaalida kacdoonada shacabka ee kajira intabadan wadanka ay kooxda TPLF tu maamusho.
Wariyaha ayaa sheegay in xukuumada wayaanuhu ay kuhowlantahay isku dirka dadka shacabka ah ee dariska iyo walaalahaba ah, wuxuuna wariyuhu xusay in taliska wayaanuhu uu dhaqaale badan u adeegsaday isku dirka shacabka.
Wariyaha ayaa sheegay in taliska wayaanuhu uu modo dheer mashquul ku ahaa iskudirka qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo ah meelaha uu talisku wakhtiga badan kubixiyay si ay isu laayaan, wuxuuna wariyuhu sheegay in xukuumada wayaanuhu ay kuguulaystay qaybo badan oo dadaalkoodii isku dirka shacabka ah.
Wariyaha ayaa sheegay in siyaasad xumida iyo dhaqan xumida ay xukuumada wayaanuhu qaadatay ay karaadinayaan woxoogaa cimri dheerar ah, taas oo wariyuhu uu ku tilmaamay talaabo soodadajin karta cimriga kooxda jahawareersan ee TPLF.
Wariyaha ayaa sheegay in tan iyo markii siyaasada noocaas ah ay wayaanuhu qaateen ay gudaha wadanka kubarakaceen kumanaan shacab ah halka kumanaan kalana ay waayeen naftoodii qaaliga ahayd, sidoo kale wariyaha ayaa sheegay in ay hanti aad ubadan baaba’day.
Gabagabadii wariyaha ayaa maqaalkiisa kusoo afmeeray talooyin dhowr ah isagoo shucuubta kala duwan ugu baaqay in ay umidoobaan cadawga midba meel kudilaya si ay ugaadhaan guulaha ay higsanayaan isla markaana ay u soo afjaraan magaca kooxda dhagar qabayaasha ah ee TPLF.